Nepal Deep | आलु कसले खाने ? कसले नखाने ?
आलु कसले खाने ? कसले नखाने ?
काठमाडौँ। आलु, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने आम तरकारी हो । यसको स्वाद मात्र नभई यसमा पाइने पोषणले हाम्रो शरीरमा फाइदा पुर्‍याउँछ ।